About Us - Ningbo Shenhe Kubereka Co., Ltd
Ningbo SHENHE Kubara CO., LTD, yakavambwa muna 1995, riri mu Ningbo City, riri pamahombekombe kumaodzanyemba Hangzhou Bay Sea-kuyambuka Bridge. SHB ari nyanzvi akaigadzira maduku uye duku nemazvo zvakadzama paburi bhora akatakura, bhora kuzvipira tsitsi akatakura, zvina-pfungwa kuonana bhora akatakura uye non-mureza bhora kubereka.
Mushure akadzikama kukura makore 23, SHB muridzi fekitari kunharaunda 40000 mativi metres pamwe nakisa vachikuya dzaFord uye neungano kwangoitwa kugadzirwa mutsetse, uyewo mamwe yemhando kubudiswa uye kuedzwa midziyo vezvikwata anopfuura 200, izvo constitude kuyerwa wakakwana, ongororo uye bvunzo yezvinhu. Kurimwa Kukwanisa anokwanisa goho mamiriyoni 50 anoita maduku uye duku bhora mabheyaringi. zvigadzirwa yedu inogona kushandiswa motokari, mudhudhudhu injini, midziyo yemagetsi uye mukuru-mugiredhi yemagetsi chokushandisa. Uyezve, motokari zvinobereka kugadzirwa anoitiswa chaiyo nharaunda, zvikuru-basa munhu uye kugadzirwa mutsetse. The chigadzirwa ine yakatsiga uye yakavimbika unhu upenyu hurefu, kumhanya, uye pamusoro mutoro, vachidikanwa kuvimba vatengi. Shenhe Kupa anofukidza mumhuri kumusika uye kumusika pamusoro USA, Europe, Japan, Taiwan, kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAsia uye dzimwe nyika uye kumatunhu.
The kambani makasimbiswa uye rakatangwa yazvino utariri mamiriro, akashandisa chinokosha utariri hurongwa, asi 5S munda utariri hurongwa, uye Kanban tsika, nokudzora kugadzirwa motokari inobereka pamwe ISO / TS 16949: 2009 yepamusoro utariri hurongwa, uye asiri Automotive inobereka pamwe ISO9001: 2008 yepamusoro utariri hurongwa